Kwazvino Kufambira Mberi muMobility Equipment - Kuvandudza neTekinoroji
Kune runyerekupe runotyisa rwunotenderera runoti vakaremara vanhu vanopotsa zviitiko zvinoverengeka zvinonakidza muhupenyu zvakadaro neyakaenderera mitsva muhunyanzvi hwamazuvano izvi hazvingagone kubva pachokwadi. Ikozvino kufamba zvishandiso zviri kunyatso shandura mararamiro eiyo vakaremara, ichipa rusununguko rwakawanda kupfuura nakare kose.
Zvirokwazvo kusimbiswa kukuru kwezvazvino kufamba Aides ndeyekuita kuti dzisadhure nekudaro dzichiita kuti dziwedzere kufambidzana kumhando dzakasiyana dzevanhu vanobva kwakasiyana siyana.
Mawiricheya ndiyo mhando inonyanya kufarirwa ye kufamba mudziyo pasi rese. vakaremara vanhu vakavashandisa kwemazana emakore; zvisinei, kuvandudzwa kutsva uye kutsva kwakachinja, mawiricheya akajairwa mumakwara anoyevedza, asingachinjiki.
Iwe unogona kuwana yakakura kwazvo rondedzero yesarudzo dziripo dzanhasi Mawiricheya; denga nderechokwadi muganho maererano nehunyanzvi hwekugadzira zvinhu nemitemo yega iri mari uye nemamiriro ezvinhu emunhu. Nhasi Mawiricheya zviri kutakurika zvakanyanya kupfuura nakare kose, zvisingaite zvakapetwa kumusoro kutorwa kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe nekukurumidza uye nyore.
kufamba Midziyo yevarwere
kufamba zvishandiso hazvirambidzwe mavhiripu. vakaremara vanhu vanogona kutenderera nekukurumidza uye nyore kupfuura nakare kose nekuda kwekufambira mberi senge kusimudza mota. Pakutanga, a vakaremara munhu kazhinji aifanira kuvimba nevamwe vanhu kuti avabatsire kupinda nekubuda mumotokari.
Izvi zvakaganhurira simba ravo rekuuya nekuenda pavainzwa senge. Mazuva ano, kusimudza mota kunopa simba a vakaremara munhu wega kuti apinde uye abudise mota yavo vega. vakaremara vanhu vari kudzosera rusununguko rwavo uye havachafaniri kuvimba nevamwe. Ngoro dzemotokari dzakabvumidzwa vakaremara vanhu kuti vatungamire kunze kwekutyaira chero pavangade uye vaongorore chero kwavanoda.
Wiricheya Technology iri Kuvandudza Nguva Dzose
Kubatsirwa kubva kune akawanda matsva mu kufamba zvigadzirwa zvechokwadi zvakakosha. Zvakangodaro, kunetsekana nezvedambudziko rekusagadzikana kunogona kuisa damper pane imwe nzira inofadza.
Nechikonzero ichi, kusagadzikana kwemidziyo kwakakosha kwazvo. Nhasi kupfuura chero nguva yapfuura, iwe unogona kuwana incontinence zvishandiso, izvo zvinogona zvakanyanya kusimudzira vanhu mararamiro. Vanhu vanorarama nehurema vanogona kuvimba nemhando dzakasiyana dze kufamba zvishandiso kana kusagadzikana kwezvinhu zvezviitiko zvakati wandei (senge zvekutenga) uye unzwisise zuva ravo zvichaenda senguva dzose.
Kune vakaremara vanhu vanongoda rubatsiro rwakati wandei - kana kuti zvimwe zvinowana zvakaoma kuva netsoka kwenguva refu - kufamba scooter isarudzo yakanaka kwazvo. Zvitoro zvinoverengeka nezvitoro zvinopa michina iyi pamubhadharo mudiki. Vanobvumidza avo vane chinetso chekufamba kuti vaende nyore nyore kubva kunzvimbo kuenda kunzvimbo. Ichi chimwe chezve chiitiko chekuti kusvika papi kufamba zvigadzirwa zvafambira mberi.
Kana iwe kana munhu waunoda ukave nehurema, usapedza imwe yechipiri yakamira padivi. Ita zvakanakisa zvezvinoitika zviitiko mukati kufamba zvishandiso uye incontinence mhinduro nhasi. Hupenyu hwako hwese huchavandudza zvakanyanya paunotanga kunakidzwa nezvishamiso zvehunyanzvi hwekugadzira.